XOG RASMI AH:- Yaa ka dambeeya qorshaha ah in gogosha shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/dhexe loogu soo wareejiyo Muqdisho? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Yaa ka dambeeya qorshaha ah in gogosha shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/dhexe loogu soo wareejiyo Muqdisho?
Ilo xog-ogaal ah aynu heleyno ayaa sheegaya in qorshaha gogosha shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe loogu soo wareejinayo magaalada Muqdisho ay ka dambeeyaan urur goboleedka IGAD iyo dowladda dalka Itoobiya.
Xogtaan oo aynu kasoo xiganayno saraakiil sare oo ku sugan xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa sheegaya in qorshahaan ay horkacayaan urur goboleedka IGAD iyo dowladda Itoobiya, waxaana la doonayaa in lagu raali geliyo Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo uu hormuudka ka yahay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Odayaashaas oo hore u shaaciyay inaysan marnaba ka qeyb-gali doonin shirka Jowhar, ayaa haatan laga rajo qabaa inay aqbalaan in shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Dhawaan ayaay ahayd markii wafdi ka socday dowladda Itoobiya ay gaareen magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay kulamo kula qaateen Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Kulankaasi ayaa la sheegay in la isku afgartay in shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe loo wareejiyo magaalada Muqdisho, islamarkaana Odayaasha Hiiraan ay shirka ka qeyb gali doonaan.
Dhinaca kale, afhayeenka gobolka Sh/dhexe Daa’uud Xaaji Cirro oo isna la hadlay warbaahinta ayaa qaadacay in shirkii maamul u sameynta labada gobol loo wareejiyo magalada Muqdisho, wuxuuna ku adkeystay in shirku ka furan yahay magaalada Jowhar, horena madaxweyne Xasan Sheekh uu u furay, ayna joogaan intooda badan odayaasha beelaha dega labada gobol.
Si kastaba ha ahaatee, madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya weli si rasmi ah uga aysan hadlin shirkaan la sheegay in loo soo wareejin doono magaalada Muqdisho, balse waxaa jira in wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda oo howshaasi u qaabilsan ay sheegtay in sidii horumar looga gaari lahaa arrintaan, ay la kaashan doonto urur goboleedka IGAD.